जिब्रो छेड्दा वाहवाही पाउने बुद्धकृष्णप्रति एम्बुलेन्स चालक बन्दा भेदभाव – Health Post Nepal
जिब्रो छेड्दा वाहवाही पाउने बुद्धकृष्णप्रति एम्बुलेन्स चालक बन्दा भेदभाव
२०७७ भदौ २३ गते १०:४४
पोखरामा थप एक संक्रमितको मृत्यु
भारतबाटै फर्किएका थिए जनकपुरका दुईजना कोरोना संक्रमित
बुद्धकृष्ण बाग (श्रेष्ठ)
भक्तपुर बोडेको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्राका दिन उनको तस्बिरले पत्रिकाका पेज र टेलिभिजनका स्क्रिन रंगिन्छन्।
सांस्कृतिक जिल्ला भक्तपुरमात्रै होइन, आम सचेत नागरिकमाझ बुद्धकृष्ण बाग (श्रेष्ठ) को अनुहारबाट सांस्कृतिक परिचय सम्झन्छन्। उनले यसरी जिब्रो छेडेको ७ वर्ष भइसक्यो।
७ वर्षदेखि जिब्रो छेड्दा सहेको पीडाभन्दा १८ वर्षदेखि दिँदै आएको सेवाका कारण समाजले गरेको भेदभावले दुखेको छ बुद्धकृष्णको मन।
उनै बुद्धकृष्णको अर्को सामाजिक परिचय छ, एम्बुलेन्स चालक। महामारीको बीचमा धेरै बिरामीलाई एम्बुलेन्सले बोक्न नमानेकै कारण अस्पताल पुग्न नसक्दा ज्यान गयो। तर, देशभरका सबै एम्बुलेन्स चालक यस्ता छैनन्, जो संकटका समयमा संक्रमणको डरले भाग्छन्।
संस्कृति जोगाउन बारम्बार जिब्रो छेडाउन तत्पर हुने उनै बुद्धकृष्ण महामारीमा पनि उस्तै जोखिम मोलेर रातदिन एम्बुलेन्सको साइरन बजाउँदै दौडिरहन्छन्।
तर, यति ठूलो विपत्तिमा सेवा गर्दा वाहवाही पाउनुपर्नेमा समाजबाट भएकोे छिःछिः दुरदुरले बुद्धकृष्णको मन कुँडिएको छ।
जिब्रो छेड्ने बुद्धकृष्ण थिमीस्थित कोरिया–नेपाल मैत्री अस्पतालको एम्बुलेन्स चलाउँछन्। त्यसो त उनले एम्बुलेन्स चलाएको १८ वर्ष भइसक्यो। उनी एम्बुलेन्स चालक संघ भक्तपुरका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्।
केही समयअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखे। त्यसमा उनले गहभरी आँसु पारेर यस्तो विपत्तिमा समाजसेवा गर्दा पनि टोलवासीद्वारा छिःछिः दुरदुरको व्यवहार गरेको कुरा उजागर गरे।
‘कोरोना महामारी आउनुभन्दा पहिला पनि म एक्बुलेन्स चलाउ“थे,’ उनी थप्छन्, ‘अहिले पनि त्यही काम हो, तर यतिबेला समाजका लागि म भेदभाव गर्नुपर्ने मान्छे भएँ?’
धेरै समयसम्म अन्य एम्बुलेन्स चालकले कोरोनाको डरले बिरामी लिन जान मान्ने अवस्था थिएन। त्यतिबेला पनि उनले आफ्नो धर्म छाडेनन्।
‘मेरै अस्पताल कोरिया मैत्रीमा तीनजना चालक भए पनि अरु डराउँथे, मैले २ महिनासम्म एक्लै संक्रमित र अन्य बिरामी पनि बोकेर दौडाएँ,’ उनी थप्छन्। संकटमा परेकालाई साथ दिएकै कारणले टोलवासीबाट भेदभाव सहनुपरेको उनको दुखेसो छ।
‘म टोलमा बाहिर निस्केको देखेसँगै सबैजना टाढाटाढा जान्छन्, म त्यही समाजलाई काम लाग्ने मान्छे होइन?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
पेसासँगै थपिएको ज्ञान र चेतनाका कारण पनि उनी त्यही समुदायमा सबैभन्दा बढी सामाजिक दूरी बनाएर र मास्क लगाएर हिँड्छन्। अहिले त एम्बुलेन्स चलाउँदा पनि त्यहीअनुसारको सावधानी अपनाइएकै हुन्छन्। तर, आफूसँग समाज डराएको देख्दा उनको मन दुख्नुका साथै दयासमेत लागेर आउँछ।
‘सबै सुरक्षाका पालना गरेर बिरामी बोक्ने हो, बिरामी लिन जाँदा नै पिपिई, पन्जा, चस्मा, मास्क सबै लगाएर जान्छु,’ उनले भने।
त्यतिमात्रै होइन, बिरामीलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएपछि सबै कुरा सुरक्षित तरिकाले फुकालेर सेनिटाइज गरी उनी अर्को बिरामी लिन जाने गर्छन्।
त्यसमाथि बिरामीलाई एम्बुलेन्समा चढाउँदा पनि उनले छुनुपर्ने होइन। पिसिआर परीक्षण पनि गराइरहेकै हुन्छन्। ‘बिरामी बोक्छ भन्दैमा लापरवाही गरेर त बोकिँदैन नि!’ उनी थप्छन्।
उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्स चालकमाथि यस्तै भेदभाव र दुव्र्यवहार गरिरहँदा यी सेवाप्रदायक घरै बस्न थाले के हालत होला? समाजले यत्ति पनि सोच्न सक्दैन त? उनको प्रश्न छ।
‘अहिले आफूलाई नपरेको बेलामा यस्तो व्यवहार गरिने व्यक्तिहरूलाई पछि आफू बिरामी हुने बेला यही एम्बुलेन्समै बसेर जाने होइन?’ उनी थप्छन्, ‘संकटको समयमा एम्बुलेन्स नपाएर कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था नआओस्।’
समाजले व्यवहार दुःखी भए पनि सेवा कर्मप्रति हतोत्साही भने नभएको उनी बताउँछन्। ‘शरीरले साथ दिँदासम्म एम्बुलेन्स नै चलाउँछु,’ उनी दोहोर्याउँछन्।
समुदायसँग गुनासो भए पनि परिवारको सहयोगले उनी निकै खुसी छन्। विशेषगरी श्रीमतीप्रति। ‘कहिलेकाहीं श्रीमतीसँग सोध्छु, मलाई कोरोना लाग्यो भने के गर्छौं? भन्दा हाँसेर जवाफ दिने गरेको उनले सुनाए।
‘तपाईंलाई लागे मलाई नि लाग्छ नि! जहाँ गए पनि सँगै जाउँला’ भन्छिन्। त्यसले आफूलाई ढाडस मिल्ने गरेको बुद्धकृष्णले सुनाए।
बुद्धकृष्णका परिवारमा श्रीमतीबाहेक दुई छोरा छन्। एकजना विदेशमा र अर्का छोरा गाडी नै चलाउँछन्। अहिले निको भएर डिस्चार्ज भएका बिरामीलाई घरसम्म पुर्याउने काममा त छोराले समेत साथ दिन्छन्।
बुद्धकृष्णले यसबीच संक्रमित र शंकास्पदसमेत गरी ३ देखि ४ सय जनालाई अस्पताल पुर्याइसकेका छन्। ‘एम्बुलेन्समा बिरामीका परिवारले तपाईं त भगवान् नै बनेर आउनुभयो भन्छन्, तर टोलवासीका लागि म राक्षस भएँ?’
हेल्थपोस्ट नेपालसँग अनुभूति सुनाइरहँदा उनले यति भन्न छुटाएनन्, ‘संक्रमित सम्झेर कोही पनि चालकले अस्पतालसम्म लान डराए भने मलाई सम्झनु म आउँछु।’
Tags: एम्बुलेन्स चालक, कोरोना संक्रमित, बुद्धकृष्ण बाग